Fanelesibonge Bengu | October 18, 2021
IMOTO: MERCEDES-AMG E53 CABRIOLET
UMA uwumuntu onamahloni njengami kunezinto owaziyo ukuthi awudlaleli kuzo ngoba zizokufakela amehlo abantu.
IMercedes-AMG E53 Cabriolet ingenye yalezo zinto okumele ungalokothi usondele kuzo ngoba amehlo avele athi njo kuyo lapho uhamba khona.
Akudingi nokuthi izinqawe zayo ezine ngemuva zibange umsindo ukuze abantu bakubuke ngenxa yokukhanga kwayo.
Umsindo wezinqawe lo (AMG performance exhaust system), usuka enjinini engu-3.0l turbo straight six enamandla angu-320kW netorque engu-520Nm. La mandla uwezwa kahle uma unyathela amafutha ngoba isuka ihlale ku-100km/h ngemizuzwa engu-4.6 bese kuthi ijubane elikhulu limiswe ku-250km/h.
Kulula ukufika kuleli jubane futhi uma unganakile, ungabona kuqhasha iphoyisa licashile ngenxa yokuthi ayizwakali ukuthi ihamba ngesivinini esiphezulu.
Ukungazwakali kwayo uma igijima cishe yikho obekuyenza nendlela ephuza ngayo uphethroli ilokhu idlalela kumalitha angu-12 ngo-100km ekubeni kubo kwayo bethi iphuza angu-8.8.
Amagiya, kwayisishiyagalolunye enawo, iwashintsha buthule ngaphandle uma usuyifake kuSport noma kuSport Plus. Amadrive modes lawa uwathola eduze ngenkinobho esesiteringini nokwenza kube lula ukuze ungasisusi isandla kuso.
Isiteringi uthi uma usibambile sigcwale isandla futhi sibe nesisindo esenza ukuthi ijike kalula uyizwe iya lapho uyikhomba khona.
Ngaphandle kokuyijabulela uma ufuna ukushesha ushaye namakhona kodwa ngisho ufuna ukuzishayelwa wumoya iyathandeka. Empeleni yilapho ethandeka khona kakhulu ikakhulu ngoba nesimo sezulu sesifudumala nje
Ngaphandle inamarimu angu-19 inch negrille ephicwe ngechrome. Yize amasondo emakhulu kodwa amabhampi ayizweli kangako. Ukuvula ukhakhayi kuyithatha imizuzwana elinganiselwa kwengu-16 futhi uyakwazi ukukwenza lokhu ngisho uhamba ngesivinini esiphansi.
Ngaphakathi ivulekile isikhala ebhuthini sikhona yize phela sincishiswe ukuthi ukhakhayi lugoqeka luyohlala khona. Ngemuva kunezimbobo ezimbili zokushaja kwazise ihlala ababili vele.
Ngaphambili izihlalo zesikhumba zihlelwa ngogesi futhi uma uzwa ngathi umoya uyabanda uyakwazi ukukhipha ofudumele entameni uphinde ushisise nezihlalo.
Kwidashboard kugqama amascreen amakhulu e-instrument cluster neMBUX multimedia system. Udinga isikhashana ukubamba ukuthi yonke into isebenza kanjani bese kuba lula. Yonke imininingwane yemoto uyibona kulama screens futhi uyakwazi nokushintsha indlela abukeka ngayo nemibala imoto ekhanyisa ngayo ngaphakathi. Okungichazayo ukuthi esiteringini kunamabhathini olawula kuwo yonke into ukuze izandla ungazisusi khona.
Kwiscreen ubone inkombandlela, uxhuma iselula nge-Apple CarPlay, udlala umsakazo okhala kamnandi, ubona ingaphandle njengoba inamakhamera umzimba wonke nokunye. Phezu kwesiteringi kwiwindscreen ineHead-up display.
I-E53 AMG Cabriolet yimoto ebukekayo yokushaywa wumoya kodwa uma udinga ijubane ulithola kalula. Ayishibhile neze kodwa.
R1 756 000
Ifika ne maintenance contract yeminyaka emihlanu noma u-100 000km.